Namhlanje ngumhla wokuzalwa kukaPaul Auster, umbhali waseMelika kunye nomenzi wefilim | Uncwadi lwangoku
Namhlanje lusuku lokuzalwa lukaPaul Auster
UCarmen Guillen | | Ababhali, iintlobo, Iincwadi, Inoveli emnyama
Njengoko isihloko sethu sibonisa, Namhlanje lusuku lokuzalwa lukaPaul Auster, ngokukodwa 70 iminyaka. Umbhali ozalelwe eNewark, kwiphondo laseNew Jersey (e-USA), une imithwalo yoncwadi ebanzi nehlanganisiweyoukongeza kwi ifilimu, kuba naye ungumlawuli wefilimu kunye nombhali wesikrini.
Ungumbhali opheleleyo, kwaye ukuba uyayithanda i-labyrinthine kunye namabali anomdla, ikakhulu avela inoveli emnyama, uya kuthanda ukuyifunda. Yenye yezona zinto zibalaseleyo zolu hlobo esinokuthi ngoku silufumane kwimarike yoncwadi. Kwaye ukuba akunjalo, apha sishwankathela onke amabhaso kunye nokuhonjiswa okufumene kule minyaka idlulileyo:
Imbasa kaMorton Dauwen Zabel Ngo-1990 (iAmerican Academy of Arts kunye neeleta).
Imbasa yeMedici Ngo-1993 (eFrance) yenoveli ebalaseleyo ngumbhali welinye ilizwe wenoveli yakhe «ILeviyatan ".
Ibhaso loMoya elizimeleyo I-1995 yeyona miboniso bhanyabhanya ibalaseleyo kwifilimu yakhe «Umsi ».
UBhishophu Omkhulu uJuan de San Clemente uLawulo lweeNcwadi 2000 ngu «Timbuktu ».
I-Knight yoMyalelo woBugcisa kunye neeleta (France, 1992).
Imbasa yeQela laseMadrid 2003 kwincwadi ebalaseleyo yonyaka «Incwadi yokukhohlisa ».
Umvuzo Yintoni yokufunda 2005 linikezelwa ngabafundi beli phephancwadi nge «Ubusuku bomlomo ».
INkosana yeAsturias Ibhaso loNcwadi yonyaka 2006.
Umvuzo kaLethe 2009 (uLeon).
Udokotela oHloniphekileyo Ukusuka kwiYunivesithi kaZwelonke yeGeneral San Martín 2014.
1 Imisebenzi ecetyiswayo nguPaul Auster
1.1 "Ibhotwe lenyanga" (Okwangoku iphelisiwe)
1.2 "Incwadi yeeNgcinga"
1.3 "Iifolokhwe zaseBrooklyn"
1.4 "INew York Trilogy"
1.5 "Idayari yasebusika"
Imisebenzi ecetyiswayo nguPaul Auster
Unokufunda phantse yonke into malunga noPaul Auster, oya kuyithanda ngokuqinisekileyo, kodwa ukuba awukafundanga nantoni na okwangoku, sikunika ezi ngcebiso zi-5:
"Ibhotwe lenyanga" (Okwangoku iphelisiwe)
UMarco Stanley Fogg ukwinqanaba lobudoda xa oosomajukujuku bebeka unyawo enyangeni. Unyana katata ongaziwayo, wafundiswa nguMalume uVictor owayedlala ngokuqaqamba, owayedlala icellinet kwiiokhestra ezinamasetyana. Ekuseni kwexesha lenyanga, umalume wakhe wasweleka, uMarco waqhubela phambili esiya ekuhluphekeni, isizungu kunye nohlobo oluthile lokuhlanya olungenangqondo 'IiDostoevskians', de kube lihle uKitty Wu amhlangule. UMarco emva koko uqala ukusebenzela umzobi wakudala okhubazekileyo kwaye ubhala i-biografi yakhe, afuna ukuyinika unyana wakhe, angazange adibane naye. Emva kohambo olude olumsa eNtshona naphantsi kwempembelelo yenyanga yonke, uMarco uyakufumanisa iimfihlakalo zemvelaphi yakhe kunye nobuntu bukayise.
UDavid Zimmer, umbhali kunye noprofesa woncwadi ovela eVermont, akasosisithunzi kuye. Uchitha iintsuku zakhe esela kwaye ecinga ngomzuzu wokugqibela apho ubomi bakhe bebunokuthi butshintshe, umzuzu xa umfazi nabantwana bakhe babengekakhweli kwinqwelomoya eyaqhushumayo. Kude kube kubusuku obunye, ukubukela phantse ngaphandle kokubukela umabonwakude, kwaye okokuqala ngqa emva kweenyanga ezintandathu zokubhadula kungenanto, kukho into emhlekisayo. Unobangela wommangaliso omncinci nguHector Mann, omnye wabahlekisi bokugqibela ababedlala ifilimu. Kwaye uDavid Zimmer ufumanisa ukuba akakabethi phantsi okwangoku, ukuba usafuna ukuhlala. Uya kuthi emva koko aqalise uphando lwakhe ngokubhala incwadi malunga noMann, oselula, okrelekrele, nohlekisayo ongumlingisi ozelwe eArgentina, omnye weefilimu zakhe zamva nje, uMnu. iyenza inyamalale.
UNathan Glass usindile kumhlaza wemiphunga nakuqhawulo-mtshato emva kweminyaka engamashumi amathathu sitshatile, kwaye ubuyile eBrooklyn, indawo ahlala kuyo ebuntwaneni bakhe. Kude kube yilapho egula wayengumthengisi weinshurensi; Ngoku akusekho mfuneko yakuziphilisa, uceba ukubhala iNcwadi yoLuntu. Uya kuxela yonke into eyenzeka macala onke kuye, yonke into eyenzekayo kuye kunye nento eyenzeka kuye. Uqala ukuya rhoqo kwibar yobumelwane kwaye uphantse wathandana ne-waitress. Kwaye uya kwivenkile ethengisa iincwadi yesibini kaHarry Brightman, indoda elifanelwe ngokwesini engatshatanga. Apho wadibana noTom, umntakwabo, unyana kadadewabo othandekayo ofileyo. Lo mfana wayengumfundi okrelekrele wekholeji. Kwaye ngoku, enesithukuthezi, uqhuba iteksi kwaye unceda uBrightman ahlele iincwadi zakhe ... Kancinci kancinci, uNathan uya kufumanisa ukuba akazanga eBrooklyn ukuza kufa, kodwa ukuza kuphila.
"INew York Trilogy"
Iqala isiXeko seGlasi, ngombhali wenoveli yolwaphulo-mthetho othi, ngethuba, abonakale esebenza njengomcuphi kwizitrato zedolophu yabakhi bezakhiwo ngelixa ebuza ukuba ungubani na. Kwi-Ghosts, i-maze yokukhangela iyenziwa ukuba uAzul, umcuphi, kufuneka atyhile. KwiGumbi eliValiweyo, umlinganiswa ophambili ugunyazisiwe ukuba akhangele umhlobo wobuntwana olahlekileyo oshiye ityesi egcwele imibhalo-ngqangi engashicilelwanga anqwenela ukuyipapasha, ngenxa yezizathu ezithile ezididayo. ubume obungabalulekanga: umncinci wenza umahluko kunye nemeko zamathuba izigqibo. Uphando lomnye luye lube kukuzikhangelela, kumnqweno wokuzifumanela owakhe kwaye wahluke.
UPaul Auster, "ongomnye wababhali abaphambili bexesha lethu" (iSan Francisco Chronicle), apha ujonge kuye. Iminyaka engamashumi amathathu emva kokupapashwa kwe -Invention of Solitude, incwadi yakhe yokuqala yeprose, i-Auster iqala ukusuka ekufikeni kweempawu zokuqala zokuguga ukuze kuvuse iziqendu ebomini bakhe: ukuvuswa komnqweno wesini, izibophelelo zomtshato, ingozi yemoto, ukusweleka kukanina okanye izindlu ezingama-21 apho ebehlala khona.
Zintandathu kuphela iingcebiso ezininzi esinokuqhubeka ukuzenza: "ILeviyatan", "Engabonakaliyo", "Indoda ebumnyameni", "Incwadi ebomvu", njalo njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Namhlanje lusuku lokuzalwa lukaPaul Auster
Kutheni sithanda iincwadi?
Iintsuku ezingama-25 kunye nomlondolozi uRicciardi, nguMaurizio de Giovanni.